Fandinihan'ny mpanjifa Google momba ny fikarohana eo amin'ny tsena sy ny fahafaham-po amin'ny tranokala | Martech Zone
Alarobia, Jona 26, 2013 Talata, Jona 25, 2013 Douglas Karr
Google dia manolotra ny fandinihan'ny mpanjifa Google ho an'ny mpikaroka momba ny tsena sy ny tompona tranokala. Tsy mpanohana goavambe amin'ny orinasa mamolavola ny fanadihadihana samirery aho, tena ezaka ho azy io orinasam-pitsikilovana ho an'ny mpanjifa iza no mikaroka sy mamorona paikady hisamborana vaovao marina. Misy mametraka fanontaniana roa amin'ny mpivady amin'ny endrika mampidi-doza amin'ny fanosehana ny orinasany mankany amin'ny lalana diso satria fotsiny ny fomba fanontaniany sy fahazoana valiny. Mitandrema.
Google Consumer Surveys dia fitaovana fikarohana fikarohana haingana, mora vidy ary marina izay manampy anao handray fanapahan-kevitra momba ny fandraharahana amin'ny alàlan'ny fanontanianao fanontaniana momba ny fanadihadiana ataon'ny mpampiasa internet. Mameno ny fanontaniana amin'ny fanadihadiana ny mpampiasa hahafahany miditra amin'ny atiny avo lenta manodidina ny tranonkala, ary mandray karama ireo mpanonta atiny rehefa mamaly ny mpampiasa azy. Google manangona sy mamakafaka ho azy ny valiny amin'ny alàlan'ny interface tsotra an-tserasera.
Ho an'ny tompona tranokala - Famotopotorana fahafaham-po maimaim-poana dia apetraka mivantana ao amin'ny tranonkalanao mba hahafahanao mahazo valiny tsara rehefa ao an-tsaina izany. Raha hampiasa ny fanadihadiana momba ny fahafaham-po, dia adikao fotsiny ary apetaho ao anaty ilay pejy izay tadiavinao ny mpampiasa anao. Manome mpikaroka fahafaham-po isam-bolana izy ireo maimaim-poana, ary azonao atao ny manamboatra fanontaniana amin'ny valiny 1 isan-jato fotsiny.
Ho an'ny fikarohana eny an-tsena - Mamorona fanadihadiana ao anatin'ny minitra vitsy ary miditra eo akaikin'ny tatitra, ny tabilao ary ny fomba ampiasain'ny Google. Mahazoa valiny statistika manan-danja sy maridrefy amin'ny maridrefy avy amin'ny olona tena izy fa tsy tontonana miangatra.
Mamorona fanadihadiana an-tserasera ianao hahazoana ny fahitan'ny mpanjifa.
Mameno fanontaniana ny olona hahazoana miditra amin'ny atiny premium.
Mahazo karama ireo mpanonta rehefa mamaly ny mpitsidika azy ireo.
Mahazo angona voangona sy voadinika tsara ianao.
Azonao atao ihany koa ny manara-maso ny valiny isaky ny roa volana na isam-bolana amin'ny famakafakana ny fironana.
Vidiny: Tanjomy ny santionany solontenan'ny US, Canada, na ny Internet amin'ny Internet UK $ 0.10 isaky ny valiny na $ 150.00 ho an'ny valiny 1500 (atolotra ho an'ny statistika manan-danja). Raha te-hizara ny santionany amin'ny demografika ianao dia $ 0.50 isaky ny valiny.
Tags: fanaraha-maso ny mpanjifafanadihadian'ny mpanjifa googlegoogle fanadihadianafanadihadiana